Kutenderera kweFekitori - Jesson Mureza Arts & Crafts Co., Ltd.
CFM yakakura 6000 mita mita (inenge 65,000 mita tsoka) musangano unokwanisa kugadzira chero chero dhizaini dhizaini kana kuratidza chigadzirwa kusvika pakukwana nekuti chinhu chimwe nechimwe chinopedzwa nemakomputa anoshandiswa nevashandi nedhijitari manejimendi sisitimu, kuona kufanana uye chigadzirwa chemhando yepamusoro nguva nenguva .
Kuti ufambirane nezvinodiwa, musangano weCFM unoshandisa mapurinda epamberi uye anomhanya kwazvo, ayo anogona kugadzira avhareji kugadzirwa kwemazuva ese kweanosvika zviuru zvishanu zvemamita.2. Iwo michina inomhanya maawa makumi maviri nemana pazuva kuti ive nechokwadi chekukurumidza kutungamira nguva.
Vashandi vedu ve110-plus vane hunyanzvi munzira dzakasiyana siyana dzekudhinda, zvinoreva kuti unogona kunyatsogadzirisa ako ekushambadzira zvinhu kune zvaunoda. Kana zvasvika kune yakaoma mifananidzo uye yepamusoro-resolution mapikicha kana ruvara kubuda ropa, funga nezve digital kudhinda. Kupisa-kuchinjisa kudhinda zvakare sarudzo kana paine kudiwa kukuru kwemavara.
Nekuti CFM ine zvakawanda zvekupa, zvinogona kuve nyore kuti unzwe kuremerwa. Kana iwe usina chokwadi kuti ndeipi nzira yekudhinda kana chigadzirwa chakakukodzera, kana kana uchida rubatsiro kugadzira logo kana mufananidzo, taura nesu nhasi. Chikwata chedu chine hushamwari uye chine ruzivo chinogona kufara kubatsira.